Lalàm-panorenana ao Filipina - Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.
Lalàm-panorenana ao Filipina
Nomena ny mitana mpanatanteraka ny ny lalàm-Panorenana
Ny lalàm-Panorenana ao Filipina na ny lalàm-Panorenana ny Filipina dia ny tampony lalàna FilipinaNy lalàm-Panorenana amin'izao fotoana izao ny Filipina, ny Filipina, ny lalàm-Panorenana ny fa nandray ny roa volana febroary eo ambany Corazon Aquino amin'ny plebiscite izay mihoatra noho ny telo - efatra na. fito amby telo-polo ny fanjakana manaiky eto, manohitra. Fa nisolo ny lalàm-Panorenana ao Filipina ny taona nolaniana eo ambany filoha Ferdinand Marcos. Izahay, ny fiandrianany Filipiana olona, nangataka fanampiana Tsitoha, mba manaova ny marina sy ny fiaraha-monina vanona sy hanorina ny governemanta nakakatawan ny lafatra sy ny hetaheta, mampiroborobo ny fanaovan-tsoa amin'ny hafa, ny hikarakara sy hampitombo ny kamanahan, ary ho azo antoka ho an'ny saming tena sy angkanang manaraka ny fitahian ny fahaleovan-tena sy ny demokrasia eo ambany fahefan'ny lalàna sy ny fitantanan-draharaha feno fahamarinana, fahamarinana, ny fahafahana, ny fitiavana, ny fitoviana sy ny fiadanana, dia naglalagda sy milaza ny toerana Tena izany. Pirenena faritany ahitana ny Filipina nosy, anisan'izany ny nosy rehetra sy ny ranomasimbe fa ny hita eto, ary ny faritany hafa izay feno hery na fahefana ny Ny filipina, izay ahitana ny tany, rano, sy ny himpapawirin izany, miaraka amin'ny fari-dranomasina, ny halalin 'ny ranomasina, dia ny halalin' ny tany, hihaona amin'ny vatana, sy ny faritra hafa submarina. Ny ranomasina manodidina, nakapagitan sy mampifandray ny nosy ny vondron-nosy, na inona na inona ny halehiben'ny sy ny halehiben'izao ihany koa ny fananganana ny ampahany ny anatiny rano Filipina. Ny vetivety lalàm-panorenana voaomana nasionalista Jose Rizal ho an'ny fikambanana La Liga Filipina fa horavàna rehefa Rizal dia nialokaloka tany Dapitan. Ny filipina revolisiona ny Katipunan nitondra ny fihaonana tao ny tejeros fivoriambe izay ny voalohany pampangulo ary ny faharoa dia ny fifidianana ny filoha no nitarika tamin'ny roa amby roapolo Martsa any San Francisco de Malabon, Cavite. Na izany aza, afa-tsy ireo mpikambana afa-tsy ny fiaraha-monina no nandray anjara tsy ny manontolo ny olom-pirenena. Ny taty aoriana fihaonana ny revolisionera governemanta natao tamin'ny iray volana novambra amin'ny isthmus mixe-na-bato ao ny tanànan'i San Miguel de Mayumo ao Bulacan hamorona ny Repoblika ny isthmus mixe-na-bato. Ny repoblika dia ny lalàm-panorenana nosoratan Isabelo Artacho sy Félix Ferrer ary mifototra amin'ny voalohany lalàm-Panorenana i Kiobà. Izany dia fantatra amin'ny maha - 'Constitución Vonjimaika de la República de Filipinas' (lalàm-Panorenana vonjy maika ny Repoblikan'i Filipina) sy ny voasoratra tany am-boalohany sy nozaraina tamin'ny teny anglisy sy espaniola. Ny Malolos lalàm-Panorenana voalohany repoblikana ny lalàm-panorenana any Azia.
Izany dia nanambara ny fiandrianam-pirenena dia ny manokana dia nitoetra tao amin'ny olona, dia iray amin'ireo zo fototra maha-olombelona, misaraka ny fiangonana sy ny fanjakana ary miantso ny fananganana ny antenimieram-pirenena izay nanao toy vatana mpanao lalàna.
Izany dia miantso ihany koa ny ho endriky ny fifidianana filoham-pirenena ny governemanta ny filoha nofidian'ny maro an'isa ao amin'ny antenimiera mandritra ny teny hoe ny efa-taona.
Izany dia mitondra ny lohateny hoe 'Constitución política' sy ny mpanoratra amin'ny teny espaniola manaraka ny ny fahafahana amin'ny Espana sy pinroklama amin'ny roapolo janoary.
Izany dia manaraka sy noraisin'ny ny Malolos Kongresy izay natao tamin'ny Malolos, Bulacan. Ny Filipina dia lasa Faritany Etazonia avy amin'ny am-polony tamin'ny desambra mandra-efatra amby roa-polo Martsa. Noho izany, ny Filipina dia eo ambany fiadidian'ny ny governemanta federaly ny Etazonia tamin'ny vanim-potoana io. Ny roa-act(lalàna) ny Kaongresy ao Etazonia nandalo tamin'izany fotoana izany dia azo heverina fa ny lalàm-Panorenana ao Filipina noho ny fihetsika izany dia mamaritra ny tena manan-danja ny fitsipika ara-politika sy mamorona ny rafitra, ny fomba, ny tantara sy ny andraikitra ao amin'ny governemanta ao Filipina. Ny Filipina Organika Asa, izay indraindray dia antsoina hoe ny 'Filipina Volavolan-dalàna amin'ny ny voalohany organika lalàna ho an'ny Filipina lalàna nolanian'ny Kongresy amerikana. Izany dia manome ny fananganana ny olona voafidy Filan-kevitry ny Filipina sy manondro ny lehilatibong ny fahefana nomena ny bicameral mpanao lalàna) ny nanoratra ny asa ao amin'ny Filipiana(filankevitra avo) sy Asembleyang Filipiana(lower house). Ny tena fepetra ahitana ny lisitry ny zon'olombelona(ny volavolan-dalàna momba ny zon'olombelona) ho an'ny Filipiana sy ny fanendrena roa tsy mifidy mponina kaomisera hisolo tena an'i Filipina ny Kaongresy ao Etazonia. Ny Filipina Fahaleovantenan'ny Asa koa antsoina matetika hoe 'Jones Lalàn' efa niova ny firafitry ny governemanta ao Filipina ny alalan 'ny famongorana ny Vaomiera ao amin'ny Filipiana ho toy ny avo-tranon' ny fahefana mpanao lalàna ary nosoloina ny antenimieran-doholona nofidian'ny mpifidy ny Filipiana. Izany fihetsika izany dia voalaza mazava fa foana ny tanjona Etazonia mba hanaisotra ilay fotoana ao Filipina sy manaiky ny fahaleovantenan'i Filipina ao amin'ny haingana toy ny marin-toerana ny governemanta ao Filipina no naorina. Na dia tsy misy lalam-panorenana ny tenany, ny Attorney-mcduffie fahaleovantena nanome ny fahefana sy ny mamaritra ny rafitra ho an'ny fananganana ara-panorenana amin'ny alalan'ny fifanarahana amin'ny lalàm-panorenana. Nanoratra ny lalàm-Panorenana tamin'ny, ary pagsasaád ny Commonwealth an'i Filipina ary ampiasaina ao amin'ny Fahatelo i Faharavana ny Filipina. Nomena tany am-boalohany ny lalàm-Panorenana tamin'ny ho an'ny Kaongresy amin'ny antenimieram-pirenena.
Nasiam-panitsiana izany tamin'ny ny manana na ny antenimieran-Doholona sy ny antenimieram-pirenena.
Ao amin'ny lalàm-panorenana, miaraka amin'ny sisin-tany ny Filoha amin'ny teny hoe efa-taona, ary afaka mipetraka fotsiny ny roa teny. Fivoriana iray ny lalàm-Panorenana natao tamin'ny taona hanova ny lalàm-Panorenana ny. Amin'ny alalan'ny fiangonana, dia ny tsolotra sy ny kolikoly. Angamba ny fahatsiarovana ny resaka fanesorana amin'ny sisin-tany ny teny ny filoha satria noho izany dia afaka mihazakazaka Ferdinand Marcos tany amin'ny fe-potoana fahatelo.
Na ahoana na ahoana, mihantona ny fanambarana ny lalàna miaramila amin'ny lalàm-Panorenana ny.
Nandray ny lalàm-Panorenana nandritra ny Repoblika Faharoa mandritra ny fananiham-bohitra Japoney nandritra ny Ady lehibe Faharoa. Voafidy Jose P Laurel maha-filoha azy noho ny fankasitrahana dia ny hitany eo amin'ny fomba fitantanana ny United States ao Filipina sy noho ny anaram-boninahitra izy tamin'ny fivoriambe Iraisam-pirenena Oniversite. Izany dia ahitana ny mpanao lalàna ao amin'ny Antenimieram-Pirenena ary izay ihany no tsy mpikambana ao amin'ny United States ny kinukunsidera fa voafidy, na ny ankamaroan'ireo voatendry, ny fanaovan-dalàna fa tsy voafidy. Lasa fitaovana ny ny lalàm-Panorenana mba haha ara-dalàna ny fanafihana izy ireo noho ny saribakolin'ny governemanta ao Filipina.
Nampahafantatra ny lalàm-Panorenana toy parliamentong-karazany ny governemanta.
Nomena ny fahefan ny fanaovan-dalàna tamin'ny Antenimieram-Pirenena voafidy amin'ny fifidianana malaza ny mpikambana ao amin ny enin-taona maharitra.
Voafidy ho Filoha raha nofaranana ny filoham-panjakana avy amin'ny Mpikambana ao amin'ny Antenimieram-Pirenena sy ny mety ho lany fotoana maro.
Rehefa voafidy, tsy ny mpikambana ny Filoha ao amin'ny Antenimieram-Pirenena. Nandritra ny teny hoe, tsy pinapahihintulang lasa mpikambana ao amin'ny antoko politika, na ny hipetraka eo amin'ny seza ny anjara fanompoana samihafa. Ao amin'ny Praiminisitra ny fahefana mpanatanteraka voafidy avy amin'ny Mpikambana ao amin'ny Antenimieram-Pirenena. Ny Praiminisitra, lehiben'ny governemanta sy ny Lohan Ny fibaikoana ny miaramilany. Farany fahatelo fotoana ny lalàm-panorenana Tamin'ny taona, dia napetraka indray ny parliamentong endriky ny governemanta amin'ny fifidianana mivantana ny vahoaka ny filoha. Manaraka ny Revolisiona ny Herin'ny Vahoaka fa ny azo antoka ny Ferdinand Marcos, ary taty aoriana ny fanokanana, Corazon Aquino naneho Prokalamasyon Laharana telo volana Martsa izay nanambara ny politika nasionaly mikasika ny fampiharana ny ny fanitsiana raha toa ny fandaniana ny olona, magprotetka ny zo fototra, ny fanekena ny lalàm-panorenana vonjy maika, sy ny fanomezana milamina fandikan-teny any amin'ny governemanta, eo ambany elatry ny lalampanorenana vaovao. Amin'ny farany ihany koa ny resaka ny Filoha Corazon Aquino amin'ny alalan'ny Fanambarana Tsy misy. sivy miteraka izao tontolo izao araka ny lalàm-panorenana (fohy 'ConCom') mba manoritra ny lalàm-panorenana vaovao izay manova ny lalam-Panorenana ny mba ho ampiharina eo amin'ny vanim-potoana ny lalàna miaramila eo ambany Marcos. Hanendry Aquino ny dimam-polo mpikambana ao amin'ny vaomiera. Ny mpikambana ao dia nalaina avy amin'ny zavatra niainana samy hafa, anisan'izany ny sasany teo aloha mpikambana ao amin'ny kaongresy, teo aloha lehiben'ny fitsarana ao amin'ny Fitsarana Tampony ao Filipina atoa. Roberto Concepción, eveka Katolika sy ny talen'ny ny sarimihetsika dia Rongony fotsy Adrian. Aquino dia fanahy iniana hanendry ihany koa ny dimy ny mpikambana ao anatin'izany ny Minisitry ny Mpampiasa izay Blas Ople mpiara-dia taloha ny Marcos hatramin'ny fandroahana eto. Avy eo dia mivory ny vaomiera, voafidy ny filoha Cecilia Muñoz-Palma nipoitra ho lehibe olo-malaza ao amin'ny fanoherana Marcos manaraka ny fisotroan-dronono ny Munoz-Palma toy ny vehivavy voalohany mpiara-pitsarana ny Fitsarana tampony ao Filipina. Faranana amin'ny vaomiera ny volavolan-kevitra ao anatin'ny efa-bolana aorian'ny azy hivory. Ny olana sasany dia mafana pinagdebatehan fivoriana anisan'izany ny endriky ny governemanta fa mahazo, ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty, foana ny fikojakojana ny toby miaramila amerikana ao Clark sy Subic, ary ny fampidirana ny politika ara-toekarena ao amin'ny lalàm-panorenana. Sisa dia Adrian ny vaomiera alohan'ny finalizing izany, ary ny roa hafa solontena dia milaza ao amin'ny farany ny volavolan-dalàna ny. Vita ny ConCom ny asany tamin'ny roa ambin'ny folo volana oktobra sy nanolotra ny volavolan-dalàm-Panorenana ny Filoha Corazon Aquino tamin'ny dimy ambin'ny folo volana oktobra izy. Araka ny sehatra nasionaly fampielezan-kevitra ny fampahalalam-baovao, ny plebiscite noho ny ratification natao tamin'ny roa volana febroary. Tamin'ny iraika ambin'ny folo volana febroary, ny lalàm-panorenana vaovao dia nanambara naorina sy ampiharina. Tamin'izany andro izany, Corazon Aquino, ny mpikambana hafa ao amin'ny governemanta sy ny Mpitandro ny filaminana ao Filipina ary mianiana tsy manaja ny lalàm-panorenana.
Fanapariahana Ny Tahirim-Rafitra
መኪና ብድር ውስጥ በፊሊፒንስ አንቅስቃሴ እና ሂደት